Vaovao - Fitaovam-by vy - fanoherana ambony, fiainana lava ary fahombiazana lafo vidy
Fitaovana vy no fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana fitaovana fanapahana, fitaovana fandrefesana, bobongolo ary fitaovana tsy mahazaka fitafiana. Ny vy vy dia manana hamafin'ny rivotra avo ary afaka mitazona ny hamafin'ny hafanana avo, ary koa ny fanoherana mitafy ary ny hamafiny. mizara ho vy vy karbaona, vy firaka vy ary vy vy haingam-pandeha.
Ny vy ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana fanapahana isan-karazany, ny fivoarana mangatsiaka sy mafana dia maty, ny fitaovana fandrefesana ary ny fitaovana hafa dia antsoina hoe vy vy. Ny karazana vy rehetra dia misy fepetra takiana, toy ny hamafin'ny haavo, ny fanoherana tsara, ny hamafiny sy ny tanjaka sasany, ary ny azy manokana fepetra takiana manokana, toy ny hamafin'ny mena, fanoherana ny fiantraikany, fitoniana dimensional, fanoherana ny havizanan'ny havizanana ary fananana mekanika feno mba hamenoana ireo fepetra takiana ireo dia ampiasaina amin'ny famokarana ireo fitaovana vy misy famoronana samihafa, ary raikitra ny fizotran'ny fitsaboana hafanana.
TAA koa dia namolavola ny elatra vaovao vita amin'ny vy vy. Amin'ny alàlan'ny fanapahana, ny fikosoham-bary ary ny fizotrany hafa, ny fanoherana dia manana fanoherana mitafy sy fanoherana ny fiatraikany bebe kokoa.
Tady vy vy dia ampiasaina amin'ny tehina tariby, fitaovana fitaovana, rafitra vy, milina fananganana, vy, fitaovana, lohataona ary indostria hafa
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny vy vy fitaovana?
Ny vidin'ny vidin'ny vy vy fitaovana avo dia avo: ny vidiny dia avo kokoa noho ny lasitra mahazatra, ary ny androm-piainan'ny serivisy dia imbetsaka misy savony mahazatra. Mandritra izany fotoana izany, mampihena ny fatran'ny fikojakojana ny masinina, mampihena ny hamafin'ny asa ataon'ny mpiasa. Ny fanoherana ny anaovantsikavy vy fitaovana avo lavitra noho ny an'ny chromium blades mahazatra eny an-tsena!
Fitaovana vy vy dia karazan'akanjo mahatohitra fitafiana misy fahombiazana tena tsara. Izy io dia manana fanoherana ambony kokoa noho ny vy vita amin'ny firaka, ary manana hamafisana, tanjaka ary mari-pana avo lenta ary fanoherana ny harafesina. Ny fiainana serivisy vy vy dia mifandraika akaiky amin'ny kalitaon'ny fitsaboana hafanana. Ny fitsaboana hafanana ny vy vita amin'ny vy dia miavaka amin'ny fampidirana an-tsokosoko spheroidal mba hahazoana firafitra spheroidal mitovy sy antonony, ny fitsaboana hafanana farany dia mamono sy mampihena ny hafanana ambany (ny vy haingam-pandeha dia novonoina ary namboarina tamin'ny 560 ℃ nandritra ny intelo), mba mahazo rafitra henjana avo miaraka amin'ny karbida tsara fanamiana aparitaka amin'ny matrix martensite mora tezitra ary hiantohana ny fanoherana ny fitaovam-by vy. Hafa ny fitsaboana hafanana vy vy mametaka. Ny fitsaboana mialoha ny hafanana dia fanindronana dingana iray, ary ny fitsaboana hafanana farany dia famonoana miampy fametahana mari-pana antonony na fanamoriana hafanana avo mba hahazoana toetra mekanika feno.
Inona no maha samy hafa ny vy vy fitaovana sy ny lelana mahazatra?
TAA tifitra fanaparitahana fitaovana milina vy manana endrika malefaka sy mamiratra, lavaka fasika vitsy, androm-piainana maharitra ary fanoherana tsara. Ny ankabeazan'ny lelany tsotra dia ny chromium ambany miaraka amin'ny atin'ny chromium ambanin'ny 11%. Ny fandefasana chromium ambany dia misy lesoka lehibe kokoa toy ny porosity, ny fasika, ny fidiran'ny fasika, ny lavaka fasika, ny fanitarana fasika, ny fampangatsiahana, ny fandrotsahana tsy fahampian-tsakafo, ny poria mitete, ny lavaka famonosana, ny tsy fisian'ny hena, ny sarkoma, sns.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana vy vy?
Amin'ny ankapobeny, ny andrana vy dia manana androm-piainana lava kokoa, noho izany dia mitondra fihenam-bidy ambany kokoa. Faharoa, noho ny faharetan'ny serivisy lava sy ny fihenan'ny fantsom-by vy, dia mampihena amin'ny fomba mahomby ny toe-javatra nikatona ny masinina nanapoaka boka ho fanamboarana, ary mampihena ny vidin'ny asa.
Lahatsary famokarana vy vy fitaovana:
Ankoatry ny vy vy fitaovana, azo ampiasaina koa ny lelan'ny fitaovana hafa,Votoatin'ny Cr-12%, 20%, 25% na fangatahana.
Ary ny faritra hafa amin'ny milina fipoahana azo omena, toy ny:vanes kodiarana, impeller, caster impeller, barazy impeller, lohan'ny impeller, takelaka mpiambina, lovia fisaronana sy ny sisa.
Atrikasa famokarana madio sy milamina amin'ny fampisehoana avo lenta milina fanapoahana tifitra SY piesy detase